Sida loo barnaamij F fure gawaarida taxanaha ah
Waxaa qoray admin on 21-02-03
Hadda taxanaha cusub ee BMW F wuxuu la socdaa laba nidaam: CAS4 iyo FEM / BDC system. Laba hab oo loogu talagalay barnaamijka ka hortagga tuugada ee CAS4. Qorshaha wax qabadsiinta barnaamijka ee ay qaadatay CAS4 sanadihii hore waa la isticmaalay welina waxaa ku manaystay sayidyo badan. Barnaamijku wuxuu ku jajabiyaa jaantuska iyada oo loo marayo faragelin heer sare ah ...
Tilmaamaha tikniyoolajiyadda furaha gaariga
Sida caadiga ah, dhammaan gawaarida hadda waxay isticmaalaan isla habka bilowga-shidida korontada adoo shidaaya biilasha si ay u bilaabaan mootada ka dibna mishiinka. Si kastaba ha noqotee, habka loo xakameynayo badhanka way ka duwan tahay iyadoo kuxiran nooca gaariga. Intooda badani waxay adeegsadaan habka soo jireenka ah ee loo galiyo furaha, whi ...
Sida loola macaamilo khaladaadka furaha gaariga
Horumarinta sayniska iyo teknolojiyadda, qaabeyntaas bani'aadamnimada ah ayaa naga caawisay inaan badbaadinno dhibaatooyin badan, oo laga arki karo furaha fog ee gaariga. Furayaasha hore ee baabuurtu waa sida furayaasha guriga oo kale. Albaabka gaariga wuxuu ubaahan yahay in la furo iyadoo la gelinayo fure farsamo godka furaha ....
sida furaha gaariga u shaqeeyo？
Qodobka ugu horreeya: mabda'a shaqada ee qashinka furaha baabuurta Waxaa ka mid ah aaladaha elektaroonigga ah ee casriga ah ee gaariga ku jira, nidaamka furaha caqliga badan ayaa indhaha soo jiita. Tikniyoolajiyadda gelitaanka aan furaha lahayn waxay keeneysaa sahlanaan aad u fiican, iyo bilowga furaha ah wuxuu keenaa dareen buuxa oo tiknoolajiyadeed, laakiin Waxay ka qaalisan tahay rogidda ...
Habka loo dayactirayo Tiguan meter wuxuu muujinayaa "fure lama helin"
Gaariga waxaa la dhigay garaashka maxaadse u bilaabi la’dahay maalinta xigta? Si kastaba ha noqotee, markan dashboardka ma soo bandhigayo "nidaamka ka hortagga tuugnimada ee la hawlgeliyey", laakiin "fure lama helin", furaha fog waa caadi, laakiin ma heli karo gaariga! Waa maxay dhibaatadu? Kadib kormeer taxaddar leh, ...
Qaabka looga saarayo ladagaalanka tuugada ee nooca 4, 5 nooc ee Tiguan, Touareg, Q5, GOLF, Magotan
Volkswagen iyo Audi 4aad iyo 5aad jiilka kahortaga xatooyada ayaa ku lug yeeshay moodooyin badan, oo ay ku jiraan Volkswagen CC, Magotan, Sagitar, Passat, Tiguan, Touareg 3.6L, Golf 6, Sharan, Audi Q5, A4L, some A6L, iyo wixii la mid ah. Way tirtiri karaan ladagaalanka tuugada, sida isticmaalka Bosch MED17.X, MEV17.X, ECD17.X serie ...
Sidee loo sameeyaa haddii albaabku ku xirmo gaariga?
Heerarka nololeed ee dadku si joogto ah ayey u soo hagaagayaan, markaa nolosha Qaafiyaddu way xawaareysaa Xaaladdan oo kale, dadka qaarkiis waxay noqon doonaan kuwo khafiif ah, oo waxay had iyo jeer uga tagaan boorsooyinkooda ama waxyaabaha ay guryahooda ku leeyihiin markay baxaan.
Xagee laga heli karaa furaha gaariga ee badalka？
Sidee loo sameeyaa haddii aad lumiso furaha gaariga? Dad badan oo milkiileyaal baabuur ah ayaa dhib ka qaba dhibaatooyinkan. Markii gaadhiga cusub la keenay, waxaa jiray laba fure. Midka lumay wali wuxuu haystaa fure dheeri ah, laakiin maxaa la sameeyaa haddii furaha keydku sidoo kale lumo? Markaas waa inaad iswaafajisaa furayaasha. Maanta waxaan kuu sheegayaa sida loo waafajiyo meelaha fogfog ...
Isbeddelka biilasha bangiga dhexe: dib u eegista taariikhda badda iyo sifooyinka dib u celinta | Bangiga Dadka ee Shiinaha_Sina Finance_Sina.com
Kooxda Qudhaanjada waa halkan! Oktoobar 29! Xisaab furan hadda oo isu diyaari iibsi! [Gaariga isla markiiba u fuul si aad u noqoto saamile oo aad ugu raaxeysatid faa'iidooyinka furitaanka xisaabta Bill Biilka bangiga dhexe waa curaar muddo-gaaban ah oo uu soo saaray Bangiga Dadka ee Shiinaha, kaas oo ay iska qoreen bangiyada ganacsiga ...
Sidee loo sameeyaa haddii furaha gaariga lumo?
La xiriir rugta dayactirka Configure Fure cusub Haddii aad dooratid inaad ku hagaajiso xarunta dayactirka fure cusub, markaa waxaad u baahan tahay inaad keento gaariga iyo aqoonsiga milkiilaha. Marka loo eego moodello kala duwan, xarunta dayactirka waxay uga baahan tahay milkiilaha inuu siiyo lambarka sirta ah ee ka hortagga xatooyada 17-lambar ee furaha qaabeynta. T ...
Furaha gaariga wuxuu leeyahay afar shaqo oo qarsoon, wuxuu badbaadin karaa nolosha xilliyada degdegga ah
Kaliya fur albaabka taksiga Baabuurka badankiisa wuxuu furi karaa oo kaliya albaabka taksiga markaad riixeyso furaha fog, kaliyana markaad laba jeer riixdo, albaabada oo dhan waa la furi karaa. Darawalada qaar waxay gaariga kaqaadaan meel gawaarida la dhigto oo fog, Haddii la furo albaabka taksiga, waxay ka hortagi karaan ragga xun inay gaariga fuulaan ...
Ku siino caawimaad fiican
Nidaamka dalabka Diiwaangeli koontada emaylkaaga - Gal - Ku dar shay tiro leh gaariga - Soo gudbi (hubi) - Xulo iibiyaha Adeeggeena 1.Waxaan bixinnaa noocyo fara badan oo kala duwan oo ah furaha baabuurta, qalabka loo yaqaan 'transponder', barnaamijyada muhiimka ah, qalabka qufulka. , iwm 2. Su'aalo kasta oo la waydiiyo w ...